အသက်သေဆုံးသည်အထိ ပြင်းထန်တဲ့ တုပ်ကွေးများအကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း – DVB
အသက်သေဆုံးသည်အထိ ပြင်းထန်တဲ့ တုပ်ကွေးများအကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း
Published By DVB | 12 March, 2019
အအေးမိ တုပ်ကွေးလို့ လူတွေပြောလေ့ရှိတာဆိုတော့ တုပ်ကွေးဆိုတာက သိပ်ပြင်းထန်တဲ့ ရောဂါတစ်ခု မဟုတ်ဘူးလို့ လူတွေ ထင်စရာရှိပါတယ်။ တကယ်တမ်းက ရာသီအလိုက် အဖြစ်များလေ့ရှိတဲ့ တုပ်ကွေးအပျော့စားကြောင့်သာ တုပ်ကွေးဆိုတာက သိပ်မပြင်းထန်တဲ့ ရောဂါတစ်ခုလို့ ထင်မြင်ရတာပါ။ တကယ်တမ်းမှာတော့ အရမ်းပြင်းထန်တဲ့ တုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်တွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ အသက်သေဆုံးသည်အထိ ပြင်းထန်နိုင်တဲ့ တုပ်ကွေးတွေအကြောင်းကို ပြောပြပေးသွားမှာပါ။ တုပ်ကွေးဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲ တုပ်ကွေးဆိုတာ Influenza လို့ခေါ်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့် ဖြစ်ရတာပါ။ သူက အဓိကအားဖြင့် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကို ဒုက္ခပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ အဖြစ်များတဲ့ လက္ခဏာတွေကတော့
နှာစေး၊ ချောင်းဆိုးတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
တုပ်ကွေး ဘယ်နှစ်မျိုးရှိလဲ Influenza Virus ကို A, B, C ဆိုပြီး အုပ်စုကြီး ၃ ခု ခွဲလို့ရပါတယ်။ Influenza Virus A Influenza A ဗိုင်းရပ်စ်ကို Avian Influenza (Bird Influenza) လို့ လူသိများပါတယ်။ Influenza A ဗိုင်းရပ်စ်က တိရစ္ဆာန်တွေ၊ ငှက်တွေမှာ အဖြစ်များပါတယ်။ ပိုးကူးစက်ခံနေရတဲ့ ငှက်တွေ ကြက်တွေကတစ်ဆင့် လူတွေဆီကို ကူးစက်တာဖြစ်ပါတယ်။ Influenza A ဗိုင်းရပ်စ်က ပျံ့နှံ့မှု အများဆုံးဖြစ်ပြီး လူတွေကို ဒုက္ခအပေးနိုင်ဆုံးပါ။ Influenza A ဗိုင်းရပ်စ်မှာ H1N1 နဲ့ H5N1တို့က နာမည်အကြီးဆုံးပါ။ လူတွေကို အသက်သေဆုံးတဲ့အထိ ဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်။ ထိန်းမနိုင်လောက်အောင်ကို ကူးစက်တဲ့နှုန်းမြန်ပြီး ရောဂါဖြစ်တဲ့သူတွေ ခဏလေးအတွင်းမှာ များလာနိုင်ပါတယ်။ ၁။ H1N1 တုပ်ကွေး (သေပျောက်နှုန်း – ၂ ဒသမ ၅ မှ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း) H1N1 ကို ဝက်တုပ်ကွေးလို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ ပိုးကူးစက်ခံနေရတဲ့ ဝက်တွေကို ထိတွေ့ကိုင်တွယ်မိပြီး လူဆီကို ကူးစက်ကာ ပျံ့နှံ့လာတဲ့တုပ်ကွေး ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်အချိန်တွေတုန်းကတော့ ကြောက်ဖို့မကောင်းခဲ့ပေမယ့် ခုနောက်ပိုင်း H1N1 မျိုးစိတ်အသစ်တွေ ထွက်လာလို့ လူတွေကို အသက်သေဆုံးသည်အထိ ဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံး တုပ်ကွေးစာရင်းကို ဝင်လာခဲ့ပါပြီ။ ရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့ တခြားရာသီတုပ်ကွေးတွေလိုပါပဲ။ ချောင်းဆိုးမယ်။ နှာစေးမယ်၊ ကိုယ်အပူချိန်တက်မယ်၊ ချမ်းတုန်ပြီး အဖျားတက်မယ်၊ ခေါင်းကိုက်မယ်၊ ကိုယ်တွေလက်တွေ နာကျင်ကိုက်ခဲမယ်။ ပြင်းထန်တဲ့အဆင့် ရောက်သွားပြီဆို
မူးဝေပြီး သတိလစ်ကာ အသက်သေဆုံးသည်အထိ ပြင်းထန်ပါတယ်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ် မိုးရာသီမှာ မြန်မာပြည်တွင် ဟိုးလေးတစ်ကျော်ကျော် ဖြစ်ခဲ့တဲ့ တုပ်ကွေးတစ်ခုပါ။
၂။ H5N1 ကြက်ငှက်တုပ်ကွေး (သေပျောက်နှုန်း ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း) H5N1 ကိုတော့ ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးလို့ လူသိများပါတယ်။ H5N1 ကို ၁၉၉၇ မှာ စပြီး တွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ကြက်တွေ၊ ငှက်တွေမှာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ကူးစက်ရာကတစ်ဆင့် ထိုကြက်တွေကို ကိုင်မိတဲ့ လူတွေဆီကို ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ သူက H1N1 ထက် ၁၀ ဆ ပြင်းထန်တဲ့ တုပ်ကွေးတစ်ခုပါ။ တခြားရာသီတုပ်ကွေးတွေလိုပဲ နှာစေးချောင်းဆိုး၊ ဖျားနာတာအပြင် H5N1 ဟာ အဆုတ်ပိုးဝင်ခြင်းနဲ့ အဆုတ်ရောင်ခြင်းကို ပိုဖြစ်စေပါတယ်။ H5N1 ကြောင့် လူနာရဲ့  အခြေအနေကလည်း နေ့ချင်းညချင်း ဆုတ်ယုတ်လာပြီး ပြင်းထန်တဲ့ အဆုတ်ရောင်ခြင်း၊ အခြားသော ကိုယ်တွင်းအဂါင်္များ ပျက်စီးခြင်းနဲ့ အသက်သေဆုံးခြင်းဟာ အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာတင် ဖြစ်သွားနိုင်လောက်အောင် ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ တုပ်ကွေးတစ်မျိုးပါ။ Influenza Virus B Influenza B ဗိုင်းရပ်စ်ကတော့ လူတွေမှာပဲဖြစ်နိုင်ပြီး ရာသီတုပ်ကွေးလို့လည်း လူသိများပါတယ်။ လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ဆီကို ကူးစက်တာမြန်တတ်ပြီး လေထဲနေ ကူးစက်တဲ့ ရောဂါတစ်ခုပါ။ Influenza B ဗိုင်းရပ်စ်က ထိန်းမနိုင်လောက်အောင်တော့ မပျံ့နှံ့တတ်ပါဘူး။ သူ့လက္ခဏာတွေကတော့
Influenza Virus C Influenza C ဗိုင်းရပ်စ်ကတော့ လူတွေမှာပဲ တွေ့ရပြီး A နဲ့ B လောက် မပြင်းထန်ပါဘူး။ လူတစ်ယောက်ကနေ တစ်ယောက်ကို ကူးစက်မှုကလည်း သိပ်မမြန်ပါဘူး။ နှာစေး၊ ချောင်းဆိုးတာလောက်ပဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ပြီးရင် သူ့ဘာသာသူ ပြန်သက်သာသွားပါတယ်။ ပြောပြခဲ့တာတွေကတော့ လူတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့ တုပ်ကွေးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တုပ်ကွေးဆိုတာ ခုခံအားနည်းရင် ဝင်လာတတ်တာမို့ ခုခံအားကောင်းအောင် လုပ်ထားသင့်ပါတယ်။ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တုပ်ကွေးဖြစ်တဲ့လူတွေ ရှိနေပြီဆိုတာနဲ့ အိမ်တွင်းဆေးတစ်ခွက်ဖြစ်တဲ့ ဂျင်းပြုတ်ရည်တွေသောက်တာ၊ ခုခံအားကောင်းအောင် အိပ်ရေးဝဝအိပ်တာ၊ အစားမှန်မှန်စားတာတွေ လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ ကိုယ့်မှာ တုပ်ကွေးဖြစ်နေရင်လည်း အခြားသူတွေကို ထပ်မကူးစက်အောင် နှာစေးချောင်းဆိုးရင် လက်ကိုင်ပုဝါနဲ့အုပ်ပြီး ဆိုးတာမျိုးတွေ လုပ်သင့်ပါတယ်။ ခုနောက်ပိုင်း ဆေးပညာတိုးတက်လာတော့ တုပ်ကွေးကို ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ဖို့ ကာကွယ်ဆေးတွေ ကြိုပြီးထိုးထားနိုင်ပါပြီ။ တုပ်ကွေးဆိုတာကလည်း တစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ် ပြောင်းလဲနေတာမို့ တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးကို တစ်နှစ်တစ်ခါ ထိုးသင့်ပါတယ်။ ရေးသားသူ Dr. Thin Yadanar @ Frances ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Thurein Hlaing Win. ဤဆောင်းပါးကို DVB ၏ မိတ်ဘက် ကျန်းမာရေးနှင့် ဆေးပညာဝက်ဘ်ဆိုဒ် hellosayarwon.com မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။